Rahoviana no hanomboka ny serivisy seranam-piaramanidina Rize-Artvin? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra mainty hoditra08 ArtvinRahoviana no hanomboka ny serivisy seranam-piaramanidina Rize-Artvin?
07 / 01 / 2020 08 Artvin, 53 Rize, ANKAPOBENY, Airports, Faritra mainty hoditra, Highway, Headline, TORKIA
rizioner artvin seranam-piaramanidina vita
Minisitry ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa 766 hektara sy ny kasaina fototra dia nanala ny 2,5 taona lasa izay, ny Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan, Torkia ny 2 seranam-piaramanidina Rize- nanao ny ranomasina no mameno 52 isan-jato Artvin Airport no vita.
Tamin'ny fananganana seranam-piaramanidina Rize-Artvin, izay noforonin'ny Ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa any amin'ny tany 766 ha hektara any Yeşilköy, distrikan'i Pazar, Rize ary napetraky ny filoha Recep Tayyip Erdoğan tamin'ny 3 aprily 2017, tany misy tany 266 tapitrisa taonina no namboarina ho an'ny tany 88,5 ha. vato tokony hampiasaina. Any amin'ny faritra ampandehanana kamiao 150 sy andro aman-alina dia mitohy ny famenoana ranomasina. Ankoatra ny kamio, sambo roa misy gony no ampiasaina koa. Manodidina ny 2 arivo taonina isan'andro no mameno ny fananganana seranam-piaramanidina, mitohy ny fizotry ny lalambe. Kanlımezra, 120 kilometatra miala ny toeran'ny tetikasa ary ny vato vita amin'ny vato Tektaş, 3 kilometatra miala azy, entin'ny kamio mankany anaty ranomasina amin'ny alàlan'ny lalana mampitohy.
Vato feno kamiao natokana ho any an-dranomasina no esorina ao anaty ranomasina raha jerena ny halalin'ny 28 metatra. Ny faritra anatiny ao anaty mola dia sahabo ho 2 tapitrisa metatra toradroa ary 2 tapitrisa 400 metatra toradroa no azo atao. 52 isanjaton'ny tetikasa no vita, famotsiam-bokatra ary famenoana famokarana amin'ny sehatry ny arabe, apron ary taxiway amin'ny martsa 2020 ao anatin'ny fototra, famokarana fototra sy famokarana coating dia mikasa ny hanomboka. Andrasana ny fampiasan'ny mpandeha 3 tapitrisa isan-taona ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina Rize-Artvin, mitentina 1 miliara 78 tapitrisa tapitrisa.
Rize sy Artvin Airport ny isan'ny tsy fahita firy eto amin'izao tontolo izao, Torkia ny seranam-piaramanidina faharoa hameno ny ranomasina. Izy io dia manome faritra feno 2 tapitrisa 600 85 metatra toradroa. Ny famenoana feno hetsy 500 300 taonina dia hatao ao amin'ny seranam-piaramanidina. Mba hanaovana izany asa manodidina ny 24 milina dia miasa XNUMX ora.
Tsara koa ny fandraisana anjara amin'ny seranam-piaramanidina Rize-Artvin amin'ny fizahan-tany. Miaraka amin'ny seranam-piaramanidina, ho lasa mora kokoa ny fidirana amorontsiraka Mainty. Varotra, fitaterana, lozika, ny faritra dia hanana serivisy maro. Ovit Tunnel, izay heverina fa nampidirina tao amin'ny seranam-piaramanidina, dia vita. Manomboka amin'ity taona ity ny seranan-tsambo lozika. Tonga hatrany amin'ny seranan-tsambo lozika sy seranam-piaramanidina ao inyidere ny vokatra avy any Atsinanana sy Atsimo Atsinanana amin'izao fotoana fohy kokoa noho ny teo aloha. Avy eto dia fitaterana be lavitra kokoa, fizahan-tany sy varotra ho any amin'ireo firenena kaokazy sy aziatika no kasa.
Dingana lehibe ho an'ny seranam-piaramanidin'i Rize-Artvin
Ny Rize Artvin Airport dia 3 metatra ka hatramin'ny 45 metatra
Ny fanehoan-kevitra amin'ny Rize-Artvin Airport no hatao androany (Video)
Ny seranam-piaramanidina Rize-Artvin dia napetraka tamin'ny volana Aprily
Ny seranam-piaramanidina Rize-Artvin no napetraka
Ny seranam-piaramanidin'i Rize-Artvin dia ho vonona amin'ny fiaramanidina amin'ny 2020
Fanaraha-maso ny seranan-tsambo avy any Erdoğan mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Rize-Artvin
Rakitsoratra vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Rize-Artvin
Minisitry ny seranam-piaramanidina tao Rize-Artvin i Arslan
Manakaiky ny 40 ny Rize Artvin serivisy amin'ny famitana
Famokarana asfalt emulsion, Coating Surface sy Kaplama
3. Rahoviana no hiditra ny tetezana?
Rahoviana no hanompo an'i Konya-Karaman-Mersin YHT ny serivisy?
HalkalıHisy siramamy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena